မီးပြတိုက်: December 2010
၂၀၁၀ နှစ်ကုန်ထိ Conference ၆ ခု၊ ဆောင်းပါး ၂ ခု တင်ခဲ့ပေမယ့် Tajikistan နိုင်ငံက Conference က ဘာ reply မှ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ Conference ၅ ခုမှာ ၄ ခုက Publication ရခဲ့ပေမယ့် တစ်ခုကတော့ အခြေနေ မသိရသေးပါဘူး။ ဆောင်းပါး ၂ စောင်မှာတော့ တစ်စောင်က ဂျာနယ်မှာ ပါသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် တစ်စောင်ကိုတော့ စောင့်နေတုန်းပါပဲ။ လောလောဆယ် ၅ အုပ်တော့ လက်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ တင်ထားဆဲ နှစ်ခု ရလာရင်တော့ ၇ ခုပေါ့။ နောက်ထပ် ၃/၄ ခုလောက် ရရင်တော့ အမိနိုင်ငံကို ပြန်ပါတော့မယ်....။
Posted by SLIP in Inspirational Bible Quotes
အနည်းငယ်သော မျိုးစေ့ကိုကြဲသောသူသည် စပါးအနည်းငယ်သာ ရိတ်ရမည်။ များစွာကြဲသောသူသည် များစွာရိတ်ရမည်ဟု မှတ်ကြလော့။ (ကောရိန္တုသြ၀ါဒစာဒုတိယစောင် ၉း၆)
Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. (2 Corinthians 9:6(NIV))
အကြင်သူသည် မိဘကို ကျိန်ဆဲ၏၊၊ ထိုသူ၏ မီးခွက်သည် ထူထပ်သော မှောင်မှိက်၌ သေလိမ့်မည်၊၊ (သုတ္တံကျမ်း ၂၀:၂၀)
Ifaman curses his father or mother, his lamp will be snuffed out in pitch darkness. (Proverb 20:20 (NIV))
ကောက်လိမ်သော စကားကို သုံးတတ်သောလူမိုက်ထက်၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သော ဆင်းရဲသူ သည် သာ၍ ကောင်း၏၊၊ စိတ်ဝိညာဉ်သည် ပညာအတတ်မရှိဘဲ မနေကောင်း၊၊ အလျင်အမြန်သွားသောသူသည် လည်း မှားယွင်းတတ်၏၊၊ (သုတ္တံကျမ်း ၁၉:၁-၂)
Betterapoor man whose walk is blameless thanafool whose lips are perverse.It is not good to have zeal without k...nowledge, nor to be hasty and miss the way. (Proverb 19:1-2 (NIV))
အမျက်တော်သည် ခဏထွက်၏၊၊ ကျေးဇူးတော်မူကား တသက်လုံး တည်၏၊၊ ညဦးယံ၌ ငိုကြွေးခြင်းသည် လာ၍ တည်းခို၏၊၊ နံနက်ယံ၌ကား သီချင်းဆိုရသော အခွင့်ရှိ၏၊၊ (ဆာလံကျမ်း ၃၀:၅)
For his anger lasts onlyamoment, but his favor lastsalifetime; weeping may remain foranight, but rejoicing comes in the morning. (Psalms 30:5 (NIV))
စကားများသောအားဖြင့် အပြစ်ပါတတ်၏။ မိမိနှုတ်ကို ချုပ်တည်း သော သူမူကား ပညာရှိ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ လျှာသည် ငွေစင်နှင့်တူ၏။ ဆိုးသောသူ၏ နှလုံးမူကား အဘိုး မထိုက်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ နှုတ်ခမ်းတို့သည် လူအများကို ကျွေးတတ်၏။ မိုက်သော သူတို့မူကား၊ ဥာဏ်မရှိ သောကြောင့် သေကြလိမ့်မည်။ (သုတ္တံကျမ်း ၁၀:၁၉-၂၁)
သင်တို့အပြစ်သည် နီသော အဆင်းရှိသော်လည်း၊ မိုဃ်းပွင့်ကဲ့သို့ဖြူလိမ့်မည်၊၊ ကတ္တီပါနီနှင့်အမျှ နီသော်လည်း၊ သိုးမွေးကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်၊၊ (ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၁း၁၈)
Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow;though they are red as crimson, they shall be like wool. (Isaiah 1:18(NIV))
သင်တို့သည် ဤလောက၏ဆားဖြစ်ကြ၏။ ဆားမူကား၊ အငန်ကင်းပျောက်လျှင် ငန်သောအရသာ ကို အဘယ်သို့ ရပြန်မည်နည်း။ ပြင်သို့ပစ်လိုက်၍ကျော်နင်းခြင်းမှတပါး အဘယ်အသုံးမျှမဝင်။ (ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅:၁၃)
You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be... thrown out and trampled by men. (Matthew 5:13 (NIV))
အချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာမှတပါး အဘယ်ကြွေးမျှမတင်စေနှင့်။ သူတပါးကိုချစ်သောသူသည် အကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံပြီ။ (ရောမသြ၀ါဒစာ ၁၃း၈)
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellowman has fulfilled the law. (Romans 13:8(NIV))
မေတ္တာသည် စိတ်ရှည်တတ်၏။ ကျေးဇူးပြုတတ်၏။ မေတ္တာသည် ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်းမရှိ၊ ဝါကြွားခြင်း မရှိ၊ မာန်မာနမရှိ။ (ကောရိ န္တု သြဝါဒစာပဌမစောင် ၁၃း၎)
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. (1 Corinthrians 13:4(NIV))
ငါ့ကို ချစ်သောသူတို့ကို ငါချစ်၏။ ငါ့ကိုကြိုးစား၍ ရှာသောသူတို့သည် တွေ့တတ်ကြ၏။ (သုတ္တံကျမ်း ၈း၁၇)
I love those who love me, and those who seek me find me. (Proverb 8:17(NIV))
ပညာရှိသောသူသည် မိမိပညာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ခွန်အားကြီးသော သူသည် မိမိခွန်အား၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဥစ္စာရတတ်သောသူသည် မိမိဥစ္စာ၌ မဝါကြွားစေနှင့်။ ဝါကြွားသောသူမည်သည်ကား၊ ငါသည် မြေကြီးပေါ်မှာ ချစ်သနားခြင်း၊ တရားသဖြင့် စီရင်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြုသောထာဝရဘုရား ဖြစ်ကြောင်းတည်းဟူသော၊ ငါ့သဘောကို သိနားလည် ခြင်း၌သာ ဝါကြွားစေ။ (ယေရမိအ...နာဂတ္တိကျမ်း ၉း၂၃-၂၄)
Let not the wise man boast of his wisdom ... Jeremiah 9:23-24(NIV)
နက်ဖြန်နေ့ကို အမှီပြု၍ မဝါကြွားနှင့်၊၊ တရက်အတွင်းတွင် အဘယ်သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်ကို မသိနိုင်၊၊ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကိုယ် မချီးမွမ်းဘဲ သူတပါးချီးမွမ်းပါလေစေ၊၊ ကိုယ်နှုတ်နှင့် ကိုယ်ကို မချီးမွမ်းဘဲ၊ ကိုယ်နှင့် မဆိုင်သော သူတပါး ချီးမွမ်း ပါလေစေ၊၊ သုတ္တံကျမ်း ၂၇း၁-၂
Do not boast about tomorrow, for you do not know whataday may bring... forth. Let another praise you, and not your own mouth... (Proverb 27:1-2(NIV))
သမ္မာသတိရှိလျက် မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကိုမျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။ (ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာပဌမစောင် ၅း၈)
Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around likearoaring lion looking for someone to devour. (1 Peter 5:8(NIV))
အချင်းချင်းမုသာ စကားကို မပြောမသုံးကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် လူဟောင်း၏အကျင့်တို့နှင့် လူဟောင်း၏ကိုယ်ကို ချွတ်ပယ်၍၊ ဖန်ဆင်းတော်မူသော သူ၏ပုံသဏ္ဍန်နှင့် အညီ၊ မှန်သောပညာအားဖြင့် အသစ်ပြုပြင်သော လူသစ်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ (ကောလောသဲသြ၀ါဒစာ ၃း၉-၁၀)
Do not lie to each other, since you have taken off your old self wi...th its practices and have put on the new self... (Colossians 3:9-10(NIV))
မတော်မလျော်သော ညစ်ညူး ပြက်ပြယ်ပြက်ယယ်သော စကားများကိုလည်း ပယ်၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကို သုံးကြလော့။ (ဧဖက်သြ၀ါဒစာ ၅း၎)
Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. (Ephesians 5:4(NIV))
လူသည် မိမိနှုတ်၏ အသီးတည်းဟူသော ကောင်းသောအရာကို စားရ၏။ပြစ်မှားတက်သော သူမူကား၊ ညှဉ်းဆဲခြင်းအပြစ်၏အသီးကို စားရ၏။ မိမိနှုတ်ကိုစောင့်သော သူသည် မိမိ၏အသက်ကို စောင့်၏။မိမိနှုတ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့်သောသူမူကား၊ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တက်၏။ သုတ္တံကျမ်း ၁၃း၂-၃
From the fruit of his lipsaman enjoys good things, but the unfaithful haveacra...ving for violence.He who guards his lips guards his life... (Proverbs 13:2-3(NIV))
သင်တို့၏ ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းသည် ငွေကို တပ်မက်ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်၍၊ ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့် ရောင့်ရဲခြင်းရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ငါသည် သင့်ကိုမစွန့်၊ သင့်ကို အလျှင်းပစ်၍မထားဟု ဂတိတော်ရှိ၏။ (ဟေဗြဲသြ၀ါဒစာ ၁၃း၅)
Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, “Never will I... leave you; never will I forsake you.” (Hebrews 13:5(NIV))
မွတ်သိပ်သောသူနှင့် ဆင်းရဲခံရသောသူကို သနားသောစိတ်နှင့် ချမ်းသာပေးလျှင်၊ မရှင်းလင်း သော အရာမှာသင်၏အလင်းသည်ပေါ်ထွန်း၍၊ သင်၏မှောင်မိုက်သည် မွန်းတည့်အလင်းကဲ့သို့ ဖြစ်လိမ့်မည်၊၊ (ဟေရှာယအနာဂတ္တိကျမ်း ၅၈း၁၀)
if you spend yourselves in behalf of the hungry and satisfy the needs of the oppressed,then your light will rise in the dark...ness, and your night will become like the noonday. (Isaiah 58:10(NIV))
ဆင်းရဲသောသူ၏ အော်ဟစ် သံကို မကြားလို၍၊ နားကိုပိတ်သောသူသည် ကိုယ်တိုင်အော်ဟစ်၍ အဘယ်သူမျှမကြားရ။ (သုတ္တံကျမ်း ၂၁း ၁၃)
Ifaman shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered. (Proverb 21:13(NIV))
ငွေကိုတပ်မက်သောသူသည် ငွေနှင့် အလိုဆန္ဒမပြေနိုင်။ စည်းစိမ်ကို တပ်မက်သော သူသည် စည်းစိမ်တိုးပွားသော်လည်း မရောင့်ရဲနိုင်။ ထိုအမှုအရာ သည်လည်း အနတ္တဖြစ်၏။ ဒေသနာကျမ်း ၅း၁၀
Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. (Ecclesiastes 5:10(NIV))
အသက်ကြီးရင့်သော ယောက်ျားတို့သည် သမ္မာသတိရှိသောသူ၊ တည်ကြည်သောသူ၊ ဣနြေ္ဒစောင့်သောသူ ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၌ စိတ်သန်သောသူ ဖြစ်ရကြမည်အကြောင်း၊...... (တိတုသြဝါဒစာ ၂:၂)
Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love and in endurance.... (Titus 2:2 (NIV))
ထိုနည်းတူ၊ အသက်ကြီးရင့်သောမိန်းမတို့သည် ကျင့်ကြံ ပြုမူရာမှာ ဓမ္မအမှုနှင့်ထိုက်တန်သောသူ၊ မချောစားတတ်သောသူ၊ စပျစ်ရည်၌ မလွန်ကျူးတတ်သောသူ၊ ကောင်း သောအတတ်ကို သင်ပေးတတ်သောသူ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်၍၊... (တိတုသြ၀ါဒစာ ၂:၃)
Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but... to teach what is good. (Titus 2:3 (NIV))
Posted by SLIP in Philosophy